पहिलो पटक एकै साथ प्रचण्डको नाति-नातिनी मिडियामा, भन्छिन प्रचण्डको नातिनी हुन पाउदा गर्भ लाग्छ (पुरा भिडियो सहित)
Posted on November 26, 2018 by Npnews
काठमाडौँ । कुनैबेला एकल गीत लिएर राष्ट्रिय सभा गृहको प्रेक्ष्यलयमा उक्लदा उनी जम्माजम्मी ११ बर्षकी फुच्ची थिइन् ।
त्यो बेलादेखि आजसम्म अविछिन्न संगीत-साधनामा छिन् । यसबीचमा पाँच दर्जन गीत रेकर्ड गराइसकिन् । तर, आजको दिनसम्म उनलाई चिनाउन त्यही विशेषण झुन्ड्याइन्छ, ‘फलानोको नातिनी’ ।
हामीले पनि उनलाई यही जिज्ञासा राखेका थियौं
स्मिताले उही शालिन मुस्कानका साथ भनेकी थिइन्, ‘हजुरबासँग जोडिएर आउँदा अबियस्ली प्राउड फिल हुन्छ ।’ दोस्रो पंक्तिमा उनले यो वाक्य पनि जोडिन्, ‘तर, म आफ्नै नाममा चिनिन चाहन्छु ।’
स्मिताको पारिवारिक चिनारी यस्तो छ । उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी गंगा दाहाली छोरी । उमेर २० बर्ष । पढाई विविए, केएमसी कलेज ग्वार्कोबाट । रुची, गाउने र नाच्ने ।
उनको व्यवसायिक चिनारी भनेको, गायिका हो । बालगीत हुँदै मायाप्रेमसम्मका गीत गाएकी छिन् । त्यो पनि दर्जनौं । एकल संगीतिक प्रस्तुत दिइसकेकी छिन् । तीन वटा एल्बम सार्वजनिक भइसकेको छ, स्मिता, स्मिता-२ र रागिनी । शास्त्रिय संगीत सिकिरहेकी छिन् ।
सुनाइहालौं, स्मिताको स्वरवद्ध गीतको भिडियो ‘पानी कुवा’को यतिबेला युट्युवको ट्रेन्डिङमा छ । भिडियोमा कार्टुन्ज क्रु, पि्रयंका कार्कीलाई फिचरिङ गराइएको छ । गीतमा स्मितालाई साथ दिएका छन्, सरोज ओलीले । दिनेश थपलियाले लेखेको, वसन्त सापकोटाले संगीत दिएको यो डान्सिङ नम्बरले स्मितालाई बढी चर्चामा ल्याएको छ । सर्वत्र ‘फलानोको नातिनीले गाएको’ भन्दै प्रचार गरिएको छ ।
नातिनीले गाएको गीतमा हजुरबाले (जसलाई स्मिता बाबा सम्बोधन गर्छिन्) कति चाख राख्दो हो ? हामीले सोध्यौं ।
‘उहाँलाई गीत मनपर्छ, चासो राख्नुहुन्छ’ स्मिताले सुनाइन्, ‘अघि भर्खर पनि मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, कति भ्युज पुगेछ भनेर ।’
स्मिताको गीत कस्तो छ, युट्युबमा कति हेरियो ? हजुरबा पुष्पकमल दाहाललाई चासो लाग्छ । उनी बेलाबखत आफ्नो मोवाइलमा नातिनीको भिडियो हेर्छन । गीत सुन्छिन् ।
‘उहाँ गीतमा इन्जोए गर्नुहुन्छ’ स्मिता भन्छिन्, ‘प्राय सुनिरहनुहुन्छ ।’
स्मिताको भनाईमा हजुरबा हरेक दिन केही समय गीत सुन्नुहुन्छ । मोवाइलबाट पुराना गीतहरु । खासगरी नारयाण गोपालको । खाना खाने समयमा ।
मुड चल्यो भने नातिनीको गीत सुन्छन् ।
स्मितालाई औंधी माया गर्ने भनेका हजुरबाले नै हो । ‘उहाँ केटाकेटीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, पुलपुल्याउनु हुन्छ’ स्मिता भन्छिन् । तर, हजुरबाको मुड सधै एकनास हुँदैन । कहिले केही समस्यामा भएजस्तो गम्भीर र, कहिले फुरुंग ।
‘टेन्सन भएको जस्तो लाग्यो भने त्यती बोलिदिन’ स्मिता भन्छिन्, ‘अरु बेला खाना खाने समयमा कुराकानी हुन्छ ।’
बेलाखबत पारिवारिक जमघट हुन्छ । त्यस्तो बेला घरमै पकाएर मिठो-मसिनो खाने गर्छन् । सबैलाई मनपर्ने, चिकेन मम । स्मिता भने पिज्जामा बढी रमाउँछिन् । यस्तो जमघटमा स्मितालाई फर्माइस आउँछ, गीत सुनाउन । उनी गाइदिन्छिन् ।
स्मिता आफ्नै चिनारी
जरुर, ‘प्रचन्डकी नातिनी’ भन्दा गर्व लाग्छ उनलाई । तर, उनी आफ्नै ‘नेम र फेम’ बनाउन चाहन्छिन् । यस्तो नाम, जहाँ कुनै फुर्को जोड्न नपरोस् ।
कतिलाई लाग्दो हो, फलानोकी नातिनी भएकाले उनले गीत गाइन् । फलानोकी नातिनी भएकाले म्युजिक भिडियो बनाइन् । फलानोकी नातिनी भएकाले चर्चा पाइन् ।
यस्तो भनाईले स्मिताको भावनामा ठेस पुग्दैन ?
‘खासमा नि’ स्मिता भन्छिन्, ‘हजुरबासँग जोडिएर चिनिन पाउँदा गर्व हुन्छ नै । तर त्यसको साइड इफेक्ट के छ भने मेरो चिनारी हराएको छ ।’
‘फलानोका नातिनी’ भनिरहँदा उनले गरेको साधना, श्रम, लगाव र उनको खुवी, दक्षता त्यसै-त्यसै ओझेल पर्छ । स्मितालाई यही कुराको डर छ । जबकी आज उनी यस्तो ‘नेम र फेम’ खोजिरहेकी छिन्, जसमा अरु विशेषण झुन्डाउन नपरोस् ।
निर्मला पन्तका बुबाको यस्तो हालतमा टिचिङ अस्पतालको मानसिक कक्षमा उपचार हुदै, खुट्टा भाचिएको अवस्थामा अस्पताल पुगे
नेपालकी छोरी श्रृंखलालाई मिस वर्ल्ड २०१८ बनाउन सक्दो भोट गरौं, सबैले यसरी भोट गरौ – स्टेप बाई स्टेप भिडियो सहित